▷ Laptọọpụ Samsung kacha mma nke 2022: echiche, na-enye ntuziaka na ...
Akara South Korea Samsung jisiri ike tinye onwe ya dị ka otu n'ime ndị isi teknụzụ na-enweghị mgbagha, yana ndị dike dị ka Apple. Mba dị iche iche a na-ejikwa iweta mma na ihe ọhụrụ na ngwaahịa ya niile, dị ka laptọọpụ ya.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo otu na ị bụ onye na-akwado ika a, ị nwere ike ijide n'aka na ị gaghị emehie ihe na ịzụrụ ...
1 Ahịa kacha mma taa na laptọọpụ Samsung
2 Samsung notebook nso
2.4 Akwụkwọ Samsung Galaxy Pro 360
2.7 Samsung Galaxy Book Gaa
3 Ụfọdụ atụmatụ nke Samsung Laptọọpụ
4 Samsung ọ bụ ezigbo akara laptop?
5 Laptọọpụ Samsung ọ bara uru? Echiche m
6 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Samsung dị ọnụ ala
Ahịa kacha mma taa na laptọọpụ Samsung
Anyị achịkọtala gị akụkụ a nke azụmahịa na laptọọpụ Samsung na-agaghị adịte aka, yabụ lelee anya wee họrọ nke gị:
Samsung Galaxy Book2 Pro…
Samsung Galaxy Book Pro…
Samsung notebook nso
Samsung kere a ọnụ ọgụgụ nke ọnụọgụ laptops iji mejuo ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke ndị ọrụ. Onye ọ bụla n'ime ha nwere ọtụtụ ụdị iji mee ka nhọrọ ahụ dịkwuo mma nakwa na onye ọ bụla nwere ike inwe afọ ojuju na ịzụrụ. Iji mata ọdịiche ha, ị ga-eburu n'uche:
Usoro a na-enye uru nke smartphone dị elu na laptọọpụ. Ya bụ, nha ultralight, yana ezigbo nnwere onwe nke ruru awa iri abụọ na ise. Na mgbakwunye, ọ nwekwara ike ịnwe teknụzụ njikọta LTE, na mgbakwunye na WiFi 25, yabụ ị nwere ike jikọọ site na iji data ebe ọ bụla ịnọ.
Samsung Galaxy Book Flex…
Ọ bụ otu n'ime oke dị iche iche, na-enwe ike ịghọ mbadamba nkume ma ọ bụ laptọọpụ mgbe ịchọrọ ya (2 na 1). Ị nwekwara ike ịrụ ọrụ na ihuenyo mmetụ ya na S Pen, nke bụ nnukwu uru maka ndị okike ma ọ bụ ndị na-ese foto. Na mgbakwunye, ọ bụ ezigbo otu maka ụmụ akwụkwọ na ndị na-eme njem. N'ezie, ha elegharaghị arụmọrụ, ngagharị, ịdịmma ihuenyo na nnwere onwe anya.
Ọ bụ nsụgharị yiri Akwụkwọ ahụ, mana emelitere ya. Ha na-ekerịta ọtụtụ n'ime njirimara ahụ, mana dị iche na akụkụ dị ka ihuenyo, na-enwe ike ịhọrọ n'etiti 13 "ma ọ bụ 15". Na mgbakwunye, ọ dị na ebe nchekwa RAM na-amalite na 8GB, kama ịmalite na 4GB. Na ngalaba nchekwa ihe otu ihe ahụ na-eme, ebe ọ na-amalite site na 256 GB, ebe Akwụkwọ na-eme ya site na 128 GB. Batrị nke akụrụngwa a abawanyela na ikike, na-aga site na 54Wh nke Akwụkwọ gaa na 63 ma ọ bụ 68Wh nke Pro. N'ihe gbasara njikọta, naanị ihe dị iche bụ na ọ gụnyere WiFi 6E. Na mgbakwunye, ọ bụ naanị nke gụnyere Ikuku PowerShare.
Akwụkwọ Samsung Galaxy Pro 360
Nke a ọzọ na-ekerịtakwa ọtụtụ atụmatụ yiri ya na Book Pro, naanị na ọ naghị akwado PowerShare, ma gbanwee nhọrọ site na 4G LTE gaa na 5G.
Ọ bụ usoro maka ndị chọrọ nkwekọrịta zuru oke n'etiti otu ndị mara mma, dị ike na ndị nwere ọgụgụ isi. Site na njedebe na-enweghị ntụpọ, ọkụ, kọmpat, nnwere onwe dị egwu, ihuenyo QLED maka ezigbo agba, yana ọtụtụ ngwa ga-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe, dịka Samsung DeX iji jikọọ ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba. Ọ gụnyekwara Ikuku PowerShare yana dakọtara na ngwaọrụ Qi ọ bụla. Enwere ike ịgba ya ngwa ngwa ma ọ ga-adịru awa iri abụọ.
Ha bụ kọmpụta dị oke ala n'ihe gbasara arụmọrụ, mana ezuru ndị na-eji ha n'ụzọ ka ukwuu. Kwesịrị ekwesị maka ụmụ akwụkwọ n'ihi ọnụ ala ha dị ala. Otu ndị a na-elekwasị anya na nnwere onwe na ngagharị dị ukwuu, ma gụnye sistemụ arụmọrụ Google ChromeOS, nke na-enye ike, nkwụsi ike na nchekwa. Na mgbakwunye, ị nwere ike iji ngwa Android dị ka nwa afọ yana ọ jikọtara ya na ọrụ igwe ojii nke Google (Gdrive, Docs, Gmail,…).
Samsung Galaxy Book Gaa
Ọ dị ka Chromebook. Laptọọpụ nwere ihe nrụpụta ARM, nke emebere ya ka ọ nweta oke ngagharị na nnwere onwe, yana ịnye ọnụ ahịa mbelata. Ọ nwekwara nnukwu uru ọzọ, dị ka teknụzụ 5G na LTE. Ihuenyo ya bụ 14 ”na, n'adịghị ka ChromeBook, ọ na-abịa na Windows 10 dị ka sistemụ arụmọrụ yana sọftụwia Microsoft jikọọ na mkpanaka gị.
Usoro ndị a niile ha na-ejikọta ụfọdụ njirimara na-ejikọta, dị ka iji S Pen, nhazi nlezianya, arụmọrụ dị elu, ike ịkekọrịta ike ikuku na-enweghị eriri (Wireless PowerShare), njikọ dị mma, nnwere onwe na njem, yana ihe kachasị mma na ihuenyo, ebe ọ na-agụnye Samsung QLED panels.
Ụfọdụ atụmatụ nke Samsung Laptọọpụ
Laptọọpụ Samsung nwere ụfọdụ atụmatụ dị ịrịba ama nke na-adọta mmasị ndị ọrụ ha karịsịa:
Ebughibu imewe: Kọmputa ndị a dị oke mkpa. Nke a na-enye ha nhazi mara mma nke ukwuu ma na-eme ka mmegharị ha dịkwuo mma, ebe ị nwere ike isi n'otu ebe gaa n'ọzọ dị mfe.
Ihuenyo Super AMOLED na-enweghị okpokolo agba- Iji mee ka elu ọrụ dịkwuo elu, ihuenyo ndị a ahapụla ma ọ bụ belata etiti ahụ. Nke ahụ ọ bụghị nanị na-eme ka ọdịdị ha dịkwuo mma, ma ha ga-enyekwa ahụmahụ dị mma nke ọma na obere akụkụ, ebe ọ bụ na elu dum bụ ihuenyo, na-enweghị mgbakwunye mgbakwunye na-eme ka nha nke laptọọpụ na-eto eto.
Uhie: ịbụ ultrabooks, kọmputa ndị a dị oke ọkụ. Obere ya na ihe eji eme ihe na-eme ka ọ dị ihe dị ka kilogram 1 n'ịdị arọ, na-eme ka ọ dị mfe ibufe.
2-na-1 mgbanwe: Enwere nsụgharị na 2-in-1 iji nweta ihe kacha mma nke mbadamba nkume na nke kacha mma nke laptọọpụ dabere na mmasị gị. Ya mere, ị nwere ike iji akụrụngwa ya na keyboard na touchpad na, mgbe ịchọrọ ya, ị nwere ike ime ya na-enweghị keyboard ma jiri ihuenyo mmetụ ya.
Nnwere onwe nke ihe ruru 25 awa: Ọtụtụ ụdị na-agafe awa 20 nke nnwere onwe, nke bụ nnukwu uru. Emebere batrị ya na njikarịcha ya ka ha nwee ike iru awa 25 n'ọnọdụ ụfọdụ, na-enweghị chajị ngwaọrụ mgbe ụbọchị ọ bụla gasịrị.
Samsung ọ bụ ezigbo akara laptop?
A maara akara Samsung nke ọma àgwà ya na ihe ọhụrụ na mpaghara ndị ọzọ, nke ahụ na-ebufekwa na laptọọpụ. Ị nwere ike nweta nnukwu ngwaahịa ma nwee nkwa nke ụlọ ọrụ dị ka nke a. Na mgbakwunye, ịbụ akara ama ama, ị na-ekwekwa nkwa ndakọrịta na ọtụtụ ngwa, ịnweta akụkụ mapụtara, wdg.
N'aka nke ọzọ, kọmputa ndị a abụghị nanị na ejiri Samsung ihuenyo panel, nke bụ otu n'ime ihe kachasị mma na ahịa yana LG, kamakwa gụnyere teknụzụ ndị ọzọ dị elu nke ụlọ ọrụ a mepụtara, SSD kacha mma na ahịa, na ngwaike. nke akara nọmba otu n'ahịa.
Laptọọpụ Samsung ọ bara uru? Echiche m
Ee, laptọọpụ Samsung bara uru ịzụta. Ọ bụ nnukwu otu egwuregwu nnukwu ika n'azụ. Nke ahụ na-enye onye ọrụ obi ike mgbe niile. Na, n'agbanyeghị na ha dịtụ ọnụ karịa tụnyere ndị ọzọ asọmpi na-eti ha na àgwà / price ruru, eziokwu bụ na ha na-agụnye ụfọdụ nkọwa na-eme ka ha mara mma nke ukwuu.
Isi nkọwa bụ nke gị njikọta WiFi 6 na WiFi 6E iji nweta ọsọ netwọk kacha mma, yana teknụzụ Bluetooth 5.1, ma ọ bụ nhọrọ 4G na 5G maka iji data ebe ọ bụla ịnọ. N'aka nke ọzọ, ọ na-agụnye Samsung software na-enwe ike jikọọ na gị mobile ngwaọrụ, nke dị nnọọ adaba ma ọ bụrụ na i nwere smartphones ma ọ bụ mbadamba si ika.
Ihe Huawei makwaara ka esi eme ya na laptọọpụ ya, na-enye ohere ịmekọrịta zuru oke na nke ngwaọrụ mkpanaka nke juru ebe niile taa. Ma nke bụ eziokwu bụ na smartphones aghọwo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ, ngwá ọrụ dị mkpa, ma ọ bụrụ na laptọọpụ na-eme ka njikọ ha dịkwuo mma, ọ ga-enye aka dị ukwuu kwa ụbọchị ...
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Samsung dị ọnụ ala
Ọ bụrụ na ị kpebiela zụta laptọọpụ Samsung, ị kwesịrị ileba anya na ụlọ ahịa ndị a ebe ị nwere ike ịhụ ya dị ọnụ ala:
Ụlọikpe Bekee: nnukwu ụlọ ahịa Spanish nwere ụfọdụ ụdị laptọọpụ Samsung na ngalaba IT ya. Ọnụ ahịa ha anaghị apụta maka ịbụ ndị kasị ala n'ahịa, ọ bụ ezie na a na-enwekarị nkwalite ụfọdụ nwere ike ịgbanwe nke ahụ. Ọ dịkarịa ala, ị ga-enwe ezigbo ọrụ na nkwa maka ịzụrụ gị, ma ị na-eme ya n'onwe gị ma ọ bụ site na ebe nrụọrụ weebụ ha.
mediamarkt: Ụlọ ọrụ German eguzobewo ọtụtụ ụlọ ahịa nkà na ụzụ na mba ahụ dum. Ị nwere ike ịga na nke kacha nso ma ọ bụ zụta online ka ezigara ya n'ụlọ gị. N'ọnọdụ ọ bụla ị ga-enweta ọnụ ahịa dị mma, ọ bụ ezie na ha enweghị otu n'ime nhọrọ kachasị ukwuu nke ngwaahịa.
Amazon: Onye na-ere ahịa ịntanetị nwere ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke Samsung brand ngwaọrụ ịhọrọ, yana ọtụtụ onyinye dị iche iche maka otu ụdị. Na nke ahụ, anyị ga-agbakwunye na ha na-enye gị ụlọ ahịa ịzụ ahịa dị mma na nke a pụrụ ịdabere na ya, yana ọrụ ngwa ngwa. Ma ọ bụrụ na ị bụ Prime, ị na-echekwa ụgwọ mbupu ma ọ ga-abịa ngwa ngwa. Ọbụna ma ọ bụrụ na iwu ahụ rutere mebiri emebi, ọ bụghị ihe ị nyere n'iwu, ma ọ bụ na ọ bụghị ihe ị tụrụ anya ya, ị nwere ike weghachite ya ngwa ngwa, n'enyeghị nkọwa, na ha ga-akwụghachi ego ahụ tupu ha enweta ngwugwu ahụ. Otu azịza kacha mma maka onye ahịa netwọkụ ...
nrutu: ụdọ gala nke ụlọ ịzụ ahịa nwekwara ngalaba teknụzụ juputara na laptọọpụ, gụnyere ụfọdụ Samsung. Ọnụ ahịa ha abụghị nke kacha mma, mana ha adịghị njọ, na mgbakwunye na inwe nkwalite dịka ọ dị na El Corte Inglés. N'okwu a, ị nwekwara ike họrọ n'etiti ịga na etiti kacha nso ịzụta ya ma ọ bụ iji online mode.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Samsung laptọọpụ